I-CX iqhathaniswa ne-UX: Umehluko Phakathi KweKhasimende Nomsebenzisi | Martech Zone
I-CX iqhathaniswa ne-UX: Umehluko Phakathi KweKhasimende Nomsebenzisi
NgoMsombuluko, Mashi 7, 2016 NgoMsombuluko, Januwari 23, 2017 Suzi Shapiro
I-CX / UX - Uhlamvu olulodwa kuphela oluhlukile? Yebo, kunezinhlamvu ezingaphezu kweyodwa, kepha kunokufana okuningi phakathi Ukutholakala kwamakhasimende futhi Okuhlangenwe nakho komsebenzisi sebenza. Ochwepheshe abanokugxila kokunye basebenzela ukufunda ngabantu ngokwenza ucwaningo!
Ukufana Kokuhlangenwe Nakho KweKhasimende kanye Nesipiliyoni Somsebenzisi
Izinhloso kanye nenqubo yeKhasimende ne-Experience User kuvame ukufana. Bobabili bane:
Umqondo wokuthi ibhizinisi aligcini ngokuthengisa nokuthenga kuphela, kepha limayelana nezidingo ezanelisayo nokunikeza inani ngenkathi wenza imali.
Ukukhathazeka ngezinkinga ezenzekayo lapho senza ukucabanga nokuhlonipha amandla wedatha enhle.
Intshisekelo kudatha eqoqwe kusuka kumakhasimende wamanje noma angahle abe khona.
Ukuhlonipha abantu abasebenzisa imikhiqizo nezinsizakalo futhi abangamakhasimende namakhasimende.
Inkolelo yokuthi abantu abavamile banganikeza imininingwane ewusizo mayelana nemikhiqizo nezinsizakalo.
Umehluko Wokuhlangenwe Nekhasimende Nokuhlangenwe Nakho Komsebenzisi
Ucwaningo Lwekhasimende - Ngenkathi umehluko ubonakala ikakhulukazi ngezindlela, idatha eqoqiwe ingahlinzeka ngezimpendulo ezahlukahlukene. Ucwaningo Lokuhlangenwe Nakho Kwekhasimende luthanda idatha evela kubantu abaningi ukubikezela ukuziphatha okungenzeka lapho abantu abaningi bethatha izinyathelo ezifanayo, becela imibono ngesici, umkhiqizo, noma umkhiqizo futhi ngokuvamile baqoqa izimpendulo zemibuzo ethile. Abantu bavame ukubika imibono yabo futhi basho lokho abakholelwa ukuthi kuyiqiniso. Ucwaningo lwe-CX luvame ukufunda izinto ezinjengalezi:
Ngiyawuthanda lo mkhiqizo.
Angisidingi leso sici.
Ngingathenga umkhiqizo uma utholakala.
Ngingayinika i-3 koku-5 ngokuba nzima ukuyisebenzisa.
Ngingawuncoma lo mkhiqizo kwabanye.
Lolu lwazi olubalulekile!
Ucwaningo Lwesipiliyoni Somsebenzisi - Ucwaningo lwe-UX lugxila kudatha eqoqwe kusuka ezinombolweni ezincane zabantu abanjengo real abasebenzisi bomkhiqizo nezinsizakalo. Ucwaningo oluningi lwenziwa nabantu ngabanye kunamaqembu abantu. Ukubuza imibuzo kungaba yingxenye yenqubo. Umehluko omkhulu ngocwaningo lwesipiliyoni somsebenzisi ukuthi abantu babonwa kuzimo ezingokoqobo lapho bezama ukuqeda imisebenzi efanelekile. Ukugxila kukuziphatha, hhayi imibono nje, efana:
Abantu abaningana babenenkinga yokuthola izinkambu zokungena ngemvume
Bonke abantu ababonile bakwazi ukukhetha umkhiqizo owuthandayo.
Munye kuphela wabantu okwazile ukuqedela inqubo yokuphuma ngaphandle kwamaphutha.
Abantu babevame ukubheka izici ezingafakwanga kudizayini yamanje, njengomsebenzi wokusesha.
Kungani lokhu kwehluka kubalulekile?
At Gravitydrive siyazi ukuthi ukuziphatha kungenzeka kusitshele ukuthi abantu bazokwenzani ngempela. Isipiliyoni sethu lapho sibuka abantu bezama ukusebenzisa imikhiqizo ukuthi bavame ukukholelwa ukuthi bayaphumelela, noma bengakaqedi umsebenzi noma isenzo ngokufanele. Abasebenzisi bathi bathola umkhiqizo wenelisa noma kulula ukuwusebenzisa, noma ngabe bebenobunzima ngenkathi bewusebenzisa. Futhi abasebenzisi bavame ukuveza ukudideka nokukhungatheka, kepha basolwe ngokwabo ngezinkinga zabo besebenzisa umkhiqizo. Ukuziphatha kwabo akuhambisani ngaso sonke isikhathi nalokho abakushoyo ngakho-ke ngivame ukukukholelwa lokho kuziphatha!
Amakhasimende athenga imikhiqizo nezinsizakalo. Abasebenzisi benza izinqumo, bathande noma bazonde umkhiqizo wakho, badideke, basebenzise umkhiqizo wakho nsuku zonke, bathenge izinto futhi babe amakhasimende namakhasimende.
Ngoba siyaqhubeka sifunde komunye nomunye, ngiyasola ukuthi izindlela ze-CX ne-UX nezindlela zokuqoqa idatha zizoqhubeka nokuhlangana / ukugqagqana. Izinhloso ziyefana ezicini eziningi - ukudala imikhiqizo nezinsizakalo eziwusizo, ezisebenzisekayo nezikhangayo
kanye nokuxhumana ngezinzuzo zabo kulabo abangaba amakhasimende abo.
Siyaqhubeka sinokuningi esizokufunda!
Tags: isipiliyoni samakhasimendecxUkuziphatha komsebenzisiisipiliyoni somsebenzisiukuhlolwa komsebenzisiux
USuzi Shapiro uchithe impilo yakhe yonke efunda ngokuthi abantu basebenza kanjani nokuthi lolu lwazi balusebenzisa kanjani ukwenza izimpilo zabo zibe ngcono. USuzi unolwazi lweminyaka eminingi njengoprofesa waseNyuvesi Psychology and Informatics nanjengoMcwaningi Wokuhlangenwe nakho Komsebenzisi futhi usebenze nabantu abavela emabhizinisini ahlukahlukene, kusuka kwezobuchwepheshe kuya kwezemali kuye kwezokwelapha kuya kwezemfundo. USuzi njengamanje uyi-Principal User Experience Consultant no GravityDrive. Imikhuba yabo ye-User Experience Design ingathuthukisa izinqubo, izinsizakalo nemikhiqizo. Ubhekele futhi nokuthuthukisa ukuqeqeshwa kwabantu abafuna ukwenza ngcono izinqubo ze-Experience Design ezinkampanini zabo.
Izindlela ezi-5 zochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi zokuthuthukisa izinkundla zabo
Mar 8, 2016 ku-8: 16 AM
Kuthakazelisa thatha uSuzi. Ngakho-ke kubonakala sengathi i-UX ingaphezulu kwesifundo se "microscopic" futhi i-CX ingaphezulu "kocwaningo lwe-macroscopic". Kungaba nengqondo lokho uma ngingachaza into efanayo ukusho usomnotho noma isazi sezinto eziphilayo?
Mar 24, 2016 ku-8: 44 PM
Ukuphawula kwakho kungenze ngacabanga! Ngiyabonga.
Ake ngihambe nesinye isingathekiso (Ngokuzitika ngokuthi lokhu kubudlabha futhi kungenzeka kunganembi kubo bonke odokotela, i-CX NOMA UX.)
Abantu abaningi abathi benza i-CX banjengokwemvelo ababheka izilwane e-zoo.
Bakhathazeke kuphela ngalokho abangakufunda okuphathelene "nokuziphatha kwe-zoo" (ukusetshenziswa ngokushesha noma ukuthengwa komkhiqizo wabo).
Bavame ukwenza umsebenzi omkhulu wokubhala phansi ukuziphatha endaweni elawulwayo, kepha bangazikhawulela esilwaneni esingafinyelelwa ngemigoqo (Njengalezo zinhlolo-vo ezivelayo ongazibona lapho usebenzisa iwebhusayithi.) (Izikhalazo, amaNet Promoter Scores, njll.)
Baphinde bathande imihlambi kunabantu ngabanye.
Ngithanda ukucabanga ukuthi abantu abenza i-UX abagcini ngokuya e-zoo kuphela, (Sifunda okuningi laphaya futhi) kepha sithanda ukuphuma siye ehlathini ukuyobuka endaweni “yemvelo”.
Lapho senza uphenyo lokuqukethwe, singalandela umuntu oyedwa usuku noma ngaphezulu.
Kunezizathu eziningi esingakwazi ukuzibona ngaso sonke isikhathi “endle”, ngakho-ke sinika izilwane izixazululo (i-web site yezitolo) bese sibheka ukuthi zenzani lapho zizama ukuxazulula izinkinga ezizwakalayo (hlola ngemuva kokukhetha umkhiqizo ).
Ngibona i-UX njengokuthi:
* Uhla olubanzi lamathuluzi.
* Ukugcizelelwa ekuziphatheni nasekubukeleni.
* Ikhwalithi kaningi kune-Quantitative.